Dalalka Jaamacadda Carabta oo taageeray go’aankii Maxkamadda Caddaaladda ee ICJ | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Dalalka Jaamacadda Carabta oo taageeray go’aankii Maxkamadda Caddaaladda ee ICJ
Ururka Jaamacadda Carabta oo ka shiraya xaaladda Falastiin
Qaahira (Halqaran.com) – War-murtiyeed kasoo baxay shirka Baarlamaanka Jaamacadda Carabta ayaa lagu soo dhaweeyay go’aankii Maxkamadda Caddaaladda ee ICJ, kaas oo Soomaaliya loogu xukumay dhul-badeedkii ay Kenya ku muransanaayeen sanado badan, sidoo kalena looga hadlay doorashada Soomaaliya.
War-murtiyeedka ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda amni iyo midda doorasho ee Soomaaliya, iyaga oo sheegay inay garab taagan yihiin Dowladda Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah Xildhibaannada Shirka ka qeyb galay ayaa sheegay in shirka sidoo kale diirada lagu saaray dagaalka ay dowladda kula jirto Ururka Al-Shabaab si guud ahaan dalka ay ula wareegtay.
Sidoo kale, waxaa uu hadalkiisa raaciyay in Baarlamaanka dalalka Jaamacadda Carabta ay sheegeen inay dowladda Soomaaliya gacan ka siinayaan howlaha doorashooyinka ee haatan socda.
Si kastaba, Baarlamaanka dalalka Jaamacadda ayaa sanad walba waxaa ay yeesheen shir ay uga hadlayaan xaaladaha ku soo kordha dalalka Carabta, iyaga oo diirada saara sidii looga gudbi lahaa dhibaatooyinka kajira waddamada Carbeed.
go'aanka Maxkamadda ICJ